China Quartz ကျောက်မျက်ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ | Montary
၁။ လျှောက်ထားခြင်း - အိမ်မီးဖိုချောင်၊ စားသောက်ဆိုင်၊ ဟိုတယ်၊ ဈေးဝယ်စင်တာ၊ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဌာန၊ စီမံကိန်း၊ အင်ဂျင်နီယာစသည်။
2. စက်ရုံ: ကျွန်ုပ်တို့တွင်အဆင့်မြင့်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံအရှိဆုံးထုတ်လုပ်သူများရှိသည်။ CNC ထွင်းထုစက်ဖြင့်အပြီးသတ်ထုတ်ကုန်များ၏အထူးဒီဇိုင်းလိုအပ်ချက်များနှင့်စာရွက်များပေါ်တွင်သင်၏အထူးလိုအပ်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်သည်။
Edge: Bevel Double, Bevel Top Single, Bull Nose Double, Bull Nose Half, Bull Nose Single, နှစ်ခါစသည်
အရည်အသွေး: ခေတ်မီနည်းပညာများကိုခေတ်မီသောနည်းပညာဖြင့်ပေးသည်။ ၎င်းသည်အပူ၊ အစွန်းအထင်းများ၊ ဘက်တီးရီးယားများနှင့်သက်ရောက်မှုများကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
အာမခံချက် - 10 နှစ်ကန့်သတ်အာမခံ
လက်မှတ်: CE / SGS / စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ
ဝန်ဆောင်မှု: ရေချိုးခန်းရေစိမ်၊ ပန်းကန်ဆေးခြင်း၊ အပေါက်ဖောက်ခြင်းများကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်
အထူ 18 မီလီမီတာ / 20mm / 30mm
လျှောက်လွှာများ Vanity Top၊ မီးဖိုချောင်ကောင်တာ၊ စားပွဲတင်နှင့်ပရိဘောဂစသည်တို့ဖြစ်သည်
နည်းပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ် ကျနော်တို့ကကျောက်ပြားနှင့်အတူကျောက်ထိပ်အောင်, စက်ဖြင့်ဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ကျွမ်းကျင်လုပ်သားများအားဖြင့်ပွတ်။
လျှောက်လွှာနှင့်အသုံးပြုမှု ထမင်းစားခန်း၊ living ည့်ခန်း၊ ဟိုတယ်၊ ဗီလာ၊ အိမ်သုံး
ငွေပေးချေမှုစနစ် T / T, L / C
ပို့ဆောင်ချိန် အမိန့်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက် 15 ရက်နှင့်အတူ
Edge ရွေးချယ်ရေး ဖြေလျှော့ပေးသောနွားတစ်ဝက်နှာခေါင်း၊ နှာခေါင်းအပြည့်၊ အကွေး၊ ၁/၄ ပတ် ၀ န်းကျင်၊
အတွေ့အကြုံ - လုပ်ကြံဖန်တီးမှုဆိုင်ရာနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံရှိသော Montary သည်အတုနှင့်ကျောက်တုံးများပြုလုပ်ရာတွင်ကျွမ်းကျင်ပြီးကျွမ်းကျင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်သမားအများစုသည်လုပ်ကြံခြင်းတွင် (၆) နှစ်အတွေ့အကြုံရှိပြီး Montary တွင်အလုပ်လုပ်ပြီးကြီးထွားလာသည်။ ဖောက်သည်တိုင်းကိုသူတို့၏ဉာဏ်ပညာနှင့်အတွေ့အကြုံများကိုပြီးပြည့်စုံသောကောင်တာတစ်ခုဖြင့်လုပ်ဆောင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသည်။ အရည်အသွေး - အရည်အသွေးသည်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်းနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းနားလည်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၄ ​​ကြိမ်စစ်ဆေးခြင်း၊ အပိုင်းအစအလိုက်အမှားကိုအနည်းဆုံးလျှော့ချရန်အခိုင်အမာပြောကြားသည်။ အချိန် - ၂၀ ပေကွန်တိန်နာတစ်လုံးအတွက်အချိန် ၂၀ ပို့ပေးပါ။ ၀ န်ဆောင်မှု - သင်လိုချင်တာကိုကျွန်ုပ်တို့သိပါတယ်။ - ကျွန်ုပ်တို့တွင်အရောင်း ၃၀ ရှိသည်။ VIP ၀ န်ဆောင်မှုကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်နည်းဖြင့်လုပ်သည်။ ထောင်ပေါင်းများစွာသောထုတ်ကုန်များ၊ အရောင်၊ စတိုင်သည်ဖောက်သည်များအတွက်အဆင်ပြေစေသည် - အမျိုးမျိုးသောကုန်ပစ္စည်းများ၏ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ အထူးထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဌာန၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ, ငါတို့အကောင်းဆုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးနိုင်ပါသည်f
အဆင့် 1 ဖြတ်တောက်ခြင်း (အနီအောက်ရောင်ခြည်တံတားဖြတ်စက်)
အဆင့် ၂ Cutout (ရေဂျက်ဖြတ်စက်)
အဆင့်3၄၅ ဒီဂရီဖြတ်တောက်ခြင်း (၄၅ ဒီဂရီဖြတ်စက်)
အဆင့်4ပိုလန် (လက်မှုပညာ)
အဆင့်5Chamfer (လက်ဝဲယိမ်းခြင်း)
အဆင့်6သန့်ရှင်း။ စစ်ဆေးပါ (လက်စွဲစာအုပ်စစ်ဆေးခြင်း)
အဆင့် ၇ ထုပ်ပိုးခြင်း (သစ်သားသေတ္တာဖြင့်)
၁။ Montary ကဘာလုပ်သလဲ။ Montary သည်အတတ်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီးအတု / သဘာ ၀ ကျောက်တုံးများနှင့်ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ထိပ်များမှထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပြီး ၁၀ နှစ်ကျော်ကမ္ဘာ့စျေးကွက်သို့တင်ပို့သည်။ 2. ဖောက်သည်များသည် Montary ကိုအဘယ်ကြောင့်ရွေးချယ်သင့်သနည်း။
၃) အဖြူရောင်အခြေပြုမီးခိုးရောင်အခြေပြုစုဆောင်းခြင်းနှင့်စကျင်ကျောက်ရောင်ခြင်း / သွေးကြောများစုဆောင်းခြင်းအပေါ်ပိုမိုအာရုံစိုက်ပါ။
၄။ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီအရည်အသွေးနှင့် ၀ န်ဆောင်မှု၊
၅) ၇ + ၂၄ လွယ်ကူသောဆက်သွယ်ရေးနှင့်မြန်ဆန်သောတုံ့ပြန်မှု။
၆။ ကျောက်ပြားနှင့်ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ထိပ်များကို Montary မှရရှိနိုင်သည်။
၃။ ဘယ်နိုင်ငံက Montary ၏အဓိကစျေးကွက်များလဲ။ Montary ကျောက်ပြားများနှင့်ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ထိပ်များကိုအဓိကအားဖြင့်ယူအက်စ်၊ သြစတြေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ယူကေ၊ အီတလီ၊ မက္ကဆီကို၊ ဒူဘိုင်း၊ တူရကီ၊ ဘရာဇီး၊ တောင်အာဖရိက၊ ဟောင်ကောင်၊ ကိုရီးယား၊ ဗီယက်နမ်၊
၄။ Montary ဟာပြပွဲတစ်ခုခုမှာပါ ၀ င်ဖူးပါသလား။ နှစ်စဉ် Montary သည်အမေရိကန်၊ ဥရောပ၊ ဒူဘိုင်း၊ ဘရာဇီး၊ အာရှစသည့်ပြပွဲများတွင်ပါ ၀ င်သည်။
၅။ Montary သည်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်ကျောက်တုံးများကိုစီမံကိန်းများအတွက်စွမ်းရည်ရှိသလား။ ဟုတ်ပါသည်၊ Montary တွင်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံများရှိပြီးအဆင့်မြင့်စီမံကိန်းများအတွက်ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသည့်ကောင်တာများအတွက်အလိုအလျောက်စက်ကိရိယာများရှိသည်။
၆။ Prefabricated tops ပြုလုပ်ရန်ဖောက်သည်များသည် Montary အားမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်ကိုပေးသင့်သနည်း။ ဖောက်သည်များအနေဖြင့်ဆိုင်ပုံဆွဲခြင်းသို့မဟုတ်လက်ဖြင့်ရေးဆွဲထားသောပုံကြမ်းကိုအတိုင်းအတာ၊ အစွန်းနှင့်ပတ်သက်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့်အရေအတွက်အတိအကျကိုပေးသင့်သည်။
၇။ Montary မှမည်သည့်အစွန်းအကွက်များကိုရရှိနိုင်သနည်း။ Montary သည်အစွန်းအကာအကွယ်အမျိုးမျိုးကိုလုပ်နိုင်သည်။ ဥပမာ - သက်တောင့်သက်သာရှိသော Polished၊ တစ်ဝက် Bullnose၊ Full Bullnose, Bevel Edge, Radius Edge, Flat Laminated, Bevel Laminated, Radius Laminated စသည်။
၈ Montary သည်အသင့်ပြင်ဆင်ထားသောကျောက်ပြားများကိုမည်သို့ထုပ်ပိုးသနည်း။ Montary သည်ကြိုတင်ထုတ်လုပ်ထားသည့်အမိုးများကိုထုပ်ပိုးထားသောသစ်သားသေတ္တာများနှင့်အကာအကွယ်အတွက်အမြှုပ်များဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။
၉။ Montary စက်ရုံရှိကုန်ပစ္စည်းများကိုမတင်ခင်စစ်ဆေးနိုင်ပါသလား။ ဟုတ်ပါသည်၊ ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးသည်ကုန်ပစ္စည်းမတင်မီကုန်ပစ္စည်းများကိုစစ်ဆေးရန်နွေးထွေးစွာကြိုဆိုပါသည်။
၁၀။ OEM ကို Montary နှင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါသလား။ ဟုတ်သည်၊ Montary သည်ဖောက်သည်၏လိုဂို (သို့) ကုမ္ပဏီ၏အမည်ကိုပုံနှိပ်ခြင်းဖြင့် OEM ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ရှေ့သို့ Nano Glass ကိုကျောက်ခဲ
နောက်တစ်ခု: ARTIFICIAL စကျင်ကျောက်
Artificial Quartz ကျောက်